Istanbul Adalar dia navotsotra tamin'ny fako voaosotra | RayHaber | raillynews
HomeTORKIAFaritra Marmara34 IstanbulIstanbul Adalar dia navotsotra tamin'ny fako
21 / 01 / 2020 34 Istanbul, ANKAPOBENY, Highway, Tire Wheel Systems, Headline, Faritra Marmara, TORKIA, VIDEO
Ny nosy Istanbul dia noravan'ny fako phaeton
Ao Buyukada, izay niady tamin'ny aretin-tsoavaly tato anatin'ny herinandro vitsivitsy, dia nodiovin'ny ekipa IMM ny fako ateraky ny phaeton ary navelan'ny mpitsidika. Fatra 25 gony no voangona naka tamina sambo ary nifindra tany amin'ny foibe famindrana fako any Istanbul.
Ny kaominina ao Istanbul Metropolitan (IMM) no nanafaingana ny asa fanadiovana ny tanàna taorian'ny niainan'ilay rivo-doza tato anatin'ny herinandro vitsivitsy. Taorian'ny amoron-dranomasina Kilyos, subsidiary İBB İSTAÇ, izay nivadika nankany Adalar, dia nahangona fako 25 taonina avy tao Büyükada.
Trano miisa 14 tao anaty banga 140 izay misy fatana İSPARK ao Buyukada no nosimboana voalohany ny ekipan'ny Dirteuritaly İBB. Noringanina indray ireo fitoeram-bavony taorian'ny nanadiovan'ny ekipa nanasa tànana ireo zezika. Ny fanadiovana ankapobeny sy ny fametahana ny tontolon'ny trano fitobiana dia nomen'ny famafana ny fiara fanasana nomen'ny talen'ny distrikan'ny Distrika.
ÇSTAÇ manadio ny morontsiraka sy ny fatin-tsoavaly ao Buyukada mandritra ny asa fanadiovana izay nanomboka tamin'ny herinandro lasa teo niaraka tamin'ny fiara 5 amoron-dranomasina sy ekipa 30. Ny asa fanadiovana dia natao teo amin'ny tehezan'ireo stra İSPARK mivory amoron-dranomasina. Tao anatin'ny haavon'ny fandinihana, dia fako 1 taonina no voaangona niaraka tamin'ny kitapon'ny nilona efa ho 5. Nentina tao anaty sambo ilay fako ary nifindra tany amin'ny foiben'ny famindrana fako any Istanbul.
Ny làlan-kianja lehibe sy ny kianja ao Buyukada koa dia nodiovina tamin'ny fanasana mekanika sy fiara fanasana mekanika. Miaraka amin'ireo zava-mahadomelina napetraka ao anaty fitoeran-drano, voaroina ihany koa ny fitaovana fanasa.
Ny fanadiovana sy ny fametahana ny famonon-tsoavaly any Heybeliada sy Burgazada dia nanomboka nanomboka androany. Mpiasa 17 sy mpiasa 80 no mandray anjara amin'ny asa.
Ireo takelaka fiarakodia voasoratra anarana ao amin'ny nosy alefa any IMM
Ben'ny Tanàna Topbaş, 8 miliara nandany 46 taona, 22 miliara hitaterana fampiasam-bola…
National Rail Train amin'i Torkia in Recovery Avy handevozin'ny Foreign atsipy
Tafavoaka velona tao anaty lamasinina ny zatovo Thailandey
Tapitra ny atrikasa fitaterana ny Nosy
Boluda Tram na Fiara Bisikileta
'Period Alo Fayton' tao İzmir
Vanim-potoana Phaeton navotsotra tany İzmir
Fiarabe sy soavaly voaray tany Alanya
Karşıyakasy ny Horses hividy any Tiorkia
Fiaran-jiro elektrika sy herin'ny herinaratra avy any Denizli mankany 22 Country
Tram tsy maty tamin'ny loza tany Eskisehir
Tafavoaka velona tao anaty fiarandalamby (Video) Espaina
Tsy tafavoaka tamin'ny famoahana ny lamasinina izy
Büyükada Navoaka tamin'ny fako avy amin'ny fiara
Nodiovina tany Buyukada ve ny fitehirizana ny phaeton
Faniriana amin'ny kalesy
Sakaryalılar dia tsy maniry tratran'ny nostalgic
Ampitomboy ny sidina sidina mankany amin'ireo Faritany Anatolian Atsinanana sy atsimo